Ururka ONLF oo Soo Dhaweeyey Cunaqabataynta Golaha Amaanku Saaray Dawlada Eritrea. – Rasaasa News
Golaha Amaanka ayaa mudo dheer ka fiirsanayey in cuna qabatayn la saaro xukuumada Eritrea iyo in kale, marar badana looga digay falalka qaska ah ee ay ka samaynayso dalalka Somaliya iyo Djabouti.
Golaha amaanku waxaa uu ka warhayaa oo kaliya dhibaatooyinka ay xukuumada Eritrea ku hayso dalalkaas, laakiin aad ugama warhayo dhibaatooyinka ay xukuumada Eritrea u gaysatay ummada Somalida Ogadeeniya iyo Ilayskii halgankii xornimo doon ee ay waday Jabhada Wadaniga ee Xoreynta Ogadeeniya.
Xukuumada Eritrea mabda,a ahaan waxay ka soo horjeeda in Somalida Ogadeeniya ay ka go,odo dalka Ethiopia, ciidamada Eritrea waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyey ee kula dagaalama ururka ONLF gudaha Ogadeeniya. Dawlada Eritrea, kolkii ay la colowday dalka Ethiopia ayey u yeedhatay qaar ka mid ah ururka ONLF oo iyagu u baahan cid alaale cid kaalmaynaysa si ay uga xoreeyaan Ogadeeniya umaysiga Itobiya.
Xukuumada Eritrea, waxay baabi,isay mabaa,dii uu lahaa ururka ONLF, waxayna samaysay dagaal ooge aan aaminsanayn wax xornimodoon ah. Madaxda ururku way ku kala qaybsantay jaha wareerka Jananka Maxamed Cumar Cismaan uu ku samaynayo halganka, ayey xukuumada Eritrea u isticmaashay in ay ku baa,biso halgankii xornimodoon ee ay waday Jabhada ONLF.
Xukuumada Eritrea, waxaa ay dhibaato wayn oo aan falal jabhadeed ahayn ka gaysatay gudaha Somalida Ogadeeniya iyada oo laysay xubno jabhadeed oo badan, dadweyne shacab ah, waxay gubtay gaa,diid shacab iyo kuwo samafal iyada oo adeegsanaysa Jananka Somaliga ah ee Maxamed Cumar Cismaan, arimahaas oo ka soo horjeeda mabaa,diida halganka ay wado Jabhada ONLF.
Dhibaatooyinkaas oo dhan ayey xukuumada Eritrea u gaysatay halganka iyo ummada Somalida Ogadeeniya oo ayna aduun weynuhu ka warhaynin, balse go,aanka laga gaadhay xukuumada Eritrea uu dan u yahay ururka ONLF iyo ummada Somalida Ogadeeniya.
Waxaanuna soo dhaweynaynaa go,aanka uu golaha amaanku ka gaadhay xukuumada Eritrea oo iyadu noqotay xukuumad dhibaato uun mooyee aan wanaag iyadu ka shaqaynin. Golaha amaankuna waxaa uu gaadhay go,aan dhabtii u danaynaya halganka uu wado ururka ONLF iyo wanaaga ummada Somalida Ogadeeniya, halgankaas oo ka talaabsan waayey xukuumada Eritrea.
Xukuumada Eritrea, waxaa ay kaliftay in ay ururka ONLF u soo jiido magac xumo weyn [terrorist] ka dib markii ay gudoomiyhii hore ee ONLF, oo isagu diiday in uu xilka ka dago, markii si harci ah looga qaaday, ayey dawlada Eritrea la midaysay ururada diimeed ee ka dagaalama dalka Somaliya.
Arintaas oo dhirbaaxo ku noqotay Jabhada in kasta oo ay jabhadu cadaysay in ayna wax xidhiidh ah la lahayn ururda xag jirka ah, Maxamed Cumar Cismana ay kali ku tahay isaga xidhiidhka uu la lee yahay ururada ka dagaalama Somaliya
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]